Dhalinyaradu waa mustaqbalka iyo aayaha ay leedahay umadi , wana laf dhabarta iyo aayatiinka ay bulshadasi leyihiiin. | Baligubadlemedia.com
Dhalinyaradu waa mustaqbalka iyo aayaha ay leedahay umadi , wana laf dhabarta iyo aayatiinka ay bulshadasi leyihiiin.
Mujtamac walbana wuxu qiimihisu ku xidhan yahay dhalin yaradiisa hadii aanay si fiican uga fa’idayasan xooga , caqliga , iyo tamarta ku jirta dhalinyara dedaas waa ummad khasaartay wxaana u danbeeya baa’ba iyo dabar go’ .
Inata badana waxa aynu tariikhda ku maqlanaa umado lahaa tariikho iyo awoodo waa weyn marki danabana baaba’ay sida xadaradihii : giriiga , romanka , faracinti IWM ,waxay ahaayen xadardo ka faidaysan waayey khayraadka dhalin yaradeda.
Wakhtiga uu ninka dhalinayarada ahi ku jiro marxalada dhalinyaranimo ,waa xiliga ay ku jirto tamar iyo awood aad ubadan uu hayana firfirconi iyo xamasada aad ubadan , waxa walbana in uu huro ay fududahay markaa hadii si fican loo tawjiihiyo dhalinyarada waxan hubaa in aynu gadhi karno guulo aad ubalaadhan .
Sidoo kale diinteenu qimo dherada ayey siisay dhalinyarada tasana waxa aynu kaqadanaynaa quranka iyo sunada (nnkh) . Allah swc waa ka qurankisa karimka ah ku leh ( waa dhalinyaro rumeeyey Rabigooda , waxaan u kordhiney Hannuun ) .
Nebigeena (saw) wuxuu dhalinyarada ku baraarujiyey in Qofkii awooda uu guursadao .
waxa uu ku yidhi Cabdulaahi bin Cabaas ( xifdi oo ilaali Allaah , asaguna Ha ku ilaaliyee) .
wuxuu u sheegey Mucaad ibnu Jabal inuu jecelyahay , wuxuu u sheegey C/laahi ibnu Cumar inuu yahay qof fiican haduu salaatu laylka tukan lahaa , wuxuu amrey Zayd bin Thaabit inuu barto luqada Siryaaniyiinta , Dhalinyaradii uu la socday Maalik bin Huweyrith markey labaatan maalmood Nebiga (saw) la joogeen oo uu siiyey koorso deg deg ah , dareemeyna iney reerkoodi u xiiseen , wuxuu amrey iney noqdaan dadkoodana ay baraan waxay faa’ideysteen .
Guntii iyo gabagabadii dhalinyarad waxa laga rabaa inay guntiga dhisha isaga dhigaan inay dalkooda iyo dadkoda kuwo anafac ay noqdaan , waxaynu rabnaa dhalinyaro ka fayow cudurka qabiilka iyo qabyaalada , waxaynu rabana dhalinyaro la dagalnata qadaka iyo qabyalada .
Hadafkena iyo ujeedadenu ha ahaaato dalkan in ayanu horumarkisa ka shaqyno dalna isma bedelo hadayna dhalinyaradisu is bedelin , yoolkena iyo hadafkenu waa dalkaan oo hore usocday oo meqamaka uu hada tagan yahay mid ka gedisan aynu uyeelnay .
baligubedle masuul kama aha aragtida dadweynaha